Abu Dhabi na Dubai mankany Melbourne ny sidina amin'izao fotoana izao
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Abu Dhabi na Dubai mankany Melbourne ny sidina amin'izao fotoana izao
I Melbourne dia tanàna iray malaza amin'ny fivoriambe, afomanga ary fomba fiaina mavitrika. Tsy amin'izao fotoana izao. COVID-19 koa dia namadika ity tanàna aostraliana ity ho tanàna matoatoa.
Ao anaty hidin-trano vaovao i Melbourne any Victoria, Aostralia noho ny valanaretina Coronavirus vaovao
Ny sidina iraisam-pirenena mankany Melbourne, ao anatin'izany ny UAE dia miato.
Hotontosaina ny fifaninanana tenisy Open Australia
Etihad Airways avy any Abu Dhabi sy Emirates avy any Dubai dia mampiato ny sidina mankany Melbourne, Aostralia taorian'ny fampidirana fepetra fanidiana vaovao tany amin'ny fanjakan'i Victoria.
Ny faribohitra Melbourne lehibe rehetra, ao anatin'izany ny seranam-piaramanidina Melbourne, dia nambara fa toerana mafana amin'ny virus coronavirus. Niditra hidin-trano dimy andro ny fanjakana hamaliana ny valan'aretina Covid-19 izay nifandray tamin'ny hotely voaroaka ao amin'ny Holiday Inn Melbourne Airport. Napetraka tamin'ny zoma io fepetra io.
Taorian'ny fanambarana dia miato ny sidina mpandeha ara-barotra rehetra avy any Dubai sy Abu Dhabi mankany Melbourne ny Emirates sy Etihad Airways. Ny famoahana indray dia tsy andrasana raha tsy amin'ny volana martsa.
Ny fanidiana mandritra ny dimy andro dia hampiharina manerana ny fanjakana Victoria mba hisorohana ny fihanaky ny viriosy avy ao amin'ny renivohi-panjakana, hoy ny praiminisitra Victoria, Andrew Andrews.
Ny sidina iraisam-pirenena ihany izay efa teny amin'ny habakabaka rehefa nambara fa hidina any amin'ny seranam-piaramanidina Melbourne. Hakatona ny sekoly sy ny orinasa maro. Ny mponina dia asaina mijanona ao an-trano afa-tsy amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena sy amin'ny tanjona tena ilaina.
Avela hitohy ny fifaninanana tenisy Open Australia izay tsy misy mpijery.
Matin'ny mosary any Thailand ny elefanta ary manome tsiny ny fizahan-tany
Happy Valentines: voninkazo 13,000 taonina nalefa tany Ekoatera